WhatsApp Emojis na emoticons pụtara - EmojisWiki.com
Omume na egwuregwu
WhatsApp Emojis na emoticons nwere Pụtara
Emepụtara emoticons n'afọ 1990 ma bụrụ nnukwu nzọụkwụ n'ịgbanwe ụzọ ndị mmadụ si eji mgbasa ozi dijitalụ na-ekwurịta okwu. Ebe ọ bụ na ha si malite, ha enyeworo aka inye echiche dị mma ma kwe ka ị kwupụta mmetụta gị ma ọ bụ mmetụta gị n'ụzọ sara mbara.
¿Ị maara na ị nwere ike ịhụ ọtụtụ narị emojis na ahụigodo dijitalụ gị?? Ndị a na-edochi nkịtị akara akara ndị ejirila ogologo oge nọchite anya ụfọdụ okwu dị ka ịmụmụ ọnụ ọchị, obi, ma ọ bụ nnukwu ọchị. Ndị a bụ obere ihu nwere okwu na-adịghị agwụ agwụ.
N'ihi nke a dị n'elu, n'isiokwu a, anyị na-akọwapụta ndepụta nke emoticons na ihe ha pụtara, ị ga-amata ihe emojis bụ, ihe a na-eji ha eme ihe, nke kachasị ewu ewu na ndị ọzọ.
Ndepụta emojis na emoticons nwere ihe pụtara site na edemede maka WhatsApp na Facebook
Nri na ihe ọṅụṅụ WhatsApp Emojis na emoticons nwere Pụtara
Emojis na Emoticons nke WhatsApp Symbol nwere Pụtara
WhatsApp Animal Emojis na emoticons nwere Pụtara
Ọrụ WhatsApp na Egwuregwu Emojis na Emoticons nwere Pụtara
Emojis na Emoticons nke WhatsApp Ihe nwere Pụtara
Njem WhatsApp na Ebe Emojis na Emoticons nwere Pụtara
Emojis ndị mmadụ na WhatsApp nwere pụtara
Kedu ihe bụ emoticons ma ọ bụ emojis?
The emoticons metụtara agwa eji na steeti ma ọ bụ ozi eletrọnịkị na nyiwe dị n'ịntanetị dị ka Instagram, WhatsApp ma ọ bụ Facebook nke na-anọchite anya mmetụta, ọchịchọ, echiche ma ọ bụ mmetụta mmadụ n'ụzọ dị iche iche.
Dị ka anyị gosiri na mmalite mmalite ya bụ Japanese na e dere okwu ya dị ka 絵⽂字 nke nwere mkpụrụedemede "e" na okwu "moji". Ndị a aghọwo ihe ewu ewu nke na ọbụna ụfọdụ ụlọ akwụkwọ mmuta ejirila ha kpọrọ ihe site n'ịhọrọ ụfọdụ dị ka ndị okwu nke afo na 2015.
Emepụtara ihe ngosi a na-ahụ anya bụ Shigetaka Kurita. N'ihi nke a, ndị ọrụ nke oge ahụ nọchiri anya ọnọdụ niile na-eji ha na mkpụrụedemede 160 nke ozi kwere.
Na mbụ Emoji nwere oke na akụkụ nke 12 x 12 pikselụ tumadi n'ihi njedebe nke teknụzụ eserese nke oge ahụ. Ebe ọ bụ na ihe ngosi a na-ahụ anya anọghị n'okpuru ikike nwebisiinka, ọtụtụ ndị na-ere ahịa Japan wepụtara ohere ịmepụta ihe oyiyi nke ha.
N'ihi nke a dị n'elu, taa a na-eji akara ndị a eme ihe ugboro ugboro ma na-enye aka dị ukwuu mgbe ị na-ede ozi ọ bụla.
Kedu ihe ha na-eji na WhatsApp na Facebook?
A na-eji emoji eme ihe na mbụ na ozi ederede iji gosipụta mmetụta ụfọdụ n'ụzọ eserese. Agbanyeghị, site na mgbanwe teknụzụ nke taa. tinye echiche sitere na isiokwu dị iche iche ka i gosi ọnọdụ dị iche iche n'ezie n'ụzọ kasị mma.
Na steeti WhatsApp, Facebook na Instagram bara ezigbo uru, yana na nkata niile ka ị gosi mmetụta dị ka ọṅụ, mmasị, olileanya, ịhụnanya, mpako, ịdị jụụ, ekele, mkpali, mpako na ọtụtụ ndị ọzọ. Ha na-enyekwa gị ohere ikwupụta mmetụta dị ka obi ụtọ, ịhụnanya, ọmịiko, ihe ijuanya, ọchị, mwute, iwe, na ndị ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ nke ndị a dị n'elu, ị nwere ike iji ihu ndị na-egosi na ahụigodo dijitalụ gị gosi na ị na-enwe nnukwu mwute maka ihe ụfọdụ. Ọzọkwa ha na-eme ka ọ dịrị gị mfe igosi oge ọṅụ gị ma ọ bụ mgbanwe na ọnọdụ gị.
Foto ndị a na-enyere gị aka ibelata ọnụ ọgụgụ okwu ịchọrọ ịkọwa, dị ka echiche nke ịga ije, ịzụ ahịa, ihi ụra, iri nri na-atọ ụtọ, wdg.
Kedu ihe emojis ma ọ bụ emoticons a na-ejikarị na steeti Facebook na WhatsApp?
N'ebe a, anyị na-ewepụta ụfọdụ emojis a na-ahụkarị na WhatsApp na Facebook statuses yana maka Instagram.
Ọ bụrụ na ị hụrụ mmadụ n'anya, ịchọrọ inwe ịhụnanya ma ọ bụ na ịma mma nke mmadụ ma ọ bụ ihe na-eju gị anya, ị nwere ike iji emoticon ịhụnanya. A na-anọchi anya ihu obi ụtọ nke nwere obi abụọ n'anya.
Ihe akara ọzọ a na-ejikarị bụ emoji na-atụ ụjọ ma ọ bụ na-eti mkpu., Ọ bụ ihu na-eju anya nke na-anọchi anya egwu ma ọ bụ egwu ma ị nwere ike iji ya mee ka ọ pụta ìhè ma ọ bụ mmetụta.
Emoji na-agba agba na-anọchi anya otu ụzọ kachasị njọ iji gosi onye mmekọ na ị ga-abụrịrị onye so ihe ma ọ bụ kpọọ ha naanị n'egwuregwu ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igosipụta mwute, enwere ihu akwa nke na-egosipụta ya ngwa ngwa. Ọ bụ nchegbu miri emi ma nwee ike inyere gị aka n'oge kacha sie ike.
Isi mkpịsị aka dị elu bara uru iji gosipụta nkwekọrịta, nkwenye ma ọ bụ nkwenye na ụfọdụ omume ma ọ bụ echiche nke ndị ọzọ.
Ị na-ahụkwa emoji ma ọ bụ ihu na-enweghị atụ bara uru nke ukwuu iji kpughee obi abụọ banyere echiche nke ndị ọzọ welitere. A na-anọchi anya ya site na ihu ekweghị ekwe, nke nwere nku anya dị jụụ.
Akara na anya mmiri nke ọchị ma ọ bụ ọṅụ na-ewu ewu n'ihi na ọ na-enyere gị aka igosipụta oke obi ụtọ, ọchị ma ọ bụ gosi na ị pụghị ịkwụsị ịchị ọchị banyere ihe. Ị nwere ike ịmata ya ngwa ngwa site na ihu ọchị ya na mmiri abụọ, otu n'ime anya ọ bụla.
Ihe osise ọzọ kacha ewu ewu bụ ihu nsusu obi. Ọ bụ ihu na-eziga nsusu ọnụ na ọ bụ ihe oyiyi ịhụnanya nke nwere ike ime ka onye ọ bụla nwee obi ụtọ.
Onye na-agba egwu flamenco bụ akara na-ekwupụta ọchịchọ ịga oriri. Ị nwere ike iji ya nke ọma gosi na ịchọrọ ịhapụ ụlọ gị maka awa ole na ole ma nwee oge dị mma.
Gịnị kpatara o ji dị mkpa ịmata kpọmkwem ihe emoticons ma ọ bụ emoji pụtara?
Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-ekerịta ihe emojis pụtara n'ụzọ na-ezighi ezi, ma ọ bụ n'ihi enweghị ozi ma ọ bụ n'ihi na gburugburu ọdịnala enyela ha ohere dị iche ogologo oge, na-eduga na nkuchi ha na-ezighi ezi.
Eziokwu bụ na emoticon ọ bụla nwere aha gọọmentị ọ bụ mmalite inye ya ihe ọ pụtara na gburugburu ebe ị na-eji ya eme ihe, ebe ọ bụ na ma ọ bụghị ya, enwere ike inwe nghọtahie na ọ ga-abụ ihe na-akpasu iwe, na-adịghị mma ma ọ bụ ọbụna na-emenye ihere maka ịghara ịghọta ihe obere ihu ahụ pụtara.
Dịka ọmụmaatụ, e nwere ihe atụ ụfọdụ na-egosi ilu ndị China dị ka nke enwe atọ. Ihe ndị a pụtara ahụghị ihe ọjọọ, anụla ihe ọjọọ, ekwula ihe ọjọọ, ma ndị mmadụ na-eji ihu ndị a n'otu n'otu na-egosipụta iru újú, ilegide anya, ma ọ bụ izobe ihe nzuzo.
Ihe nnọchianya nke ụmụ nwanyị nwere ntị oke bekee bụ ihe anụ ahụ, mana ndị mmadụ na-ejikarị emoji a gosi ihe ọchị, obi ụtọ, ma ọ bụ ọbụna obi ụtọ. Nke a karịsịa na otu ndị enyi ma ọ bụ ndị enyi na-agụnye netwọk mmekọrịta dịka Facebook, Instagram ma ọ bụ WhatsApp.
Mgbe a bịara n'ịnọchite anya mkpu, ihe ijuanya ma ọ bụ egwu, ndị mmadụ na-ejikarị aka ha na ntì eme ihe emoji nke ihu. Agbanyeghị, akara a metụtara ọrụ onye ama ama Edvard Munch.
Ị na-ahụkwa akara nsị, nke na-eme mgbe ụfọdụ ka ọ bụ ice cream chocolate. Nke bụ eziokwu bụ na okike ya metụtara omenala ndị Japan na-anọchi anya chioma.
Dịka anyị kọwara n'ihe atụ ndị gara aga, emoticon ọ bụla nwere ihe ọ pụtara, n'agbanyeghị na ọtụtụ mmadụ na-enye ya nke ha. Mana ọ dị mkpa mgbe niile ịkọwapụta ha dị ka o kwesịrị ịdị ka nkwurịta okwu na-abawanye ụba ma ghara ịghọtahie ozi.
© 2022 EmojisWiki.com · Ikike niile echekwabaraIwu kuki Gbasara Anyị?